मेस्सी बार्सिलोना छाडेर मोउरिन्होसँग खेल्न चाहन्थे! | Hamro Khelkud
मेस्सी बार्सिलोना छाडेर मोउरिन्होसँग खेल्न चाहन्थे!
एजेन्सी – बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सीले यस सिजनको ट्रान्सफर विन्डोमा क्लब छाड्ने भन्दै क्लबसमक्ष आग्रह पत्र नै लेखेपनि अन्तत: कम्तिमा सिजनको अन्त्यसम्म क्याटलान क्लबमा नै रहने निर्णय गरे ।
विगतमा पनि मेस्सीको भविष्यलाई लिएर प्रश्न उठेपनि मेस्सीले आफू बार्सिलोना नछाड्ने बताउँदै आएका थिए । तर बार्सिलोनामा व्यावसायिक करिअरको सुरुवाती दिनमा पनि मेस्सीले बार्सिलोना छाड्न चाहेको खुलेको छ । सन् २००४ मा जोसे माउरिन्होको प्रशिक्षणमा रहेको चेल्सीमा आबद्ध हुन मेस्सीले बार्सिलोना छाड्न चाहेको थिए ।
अर्जेन्टिनी फरवार्ड पोर्चुगिज प्रशिक्षक माउरिन्होको प्रशिक्षणमा खेल्न चाहन्थे । उनीहरुका बीचमा पटक पटक फोनमा कुराकानी हुन्थ्यो । पत्रकार जियानलुका डि मार्जियोले मेस्सीले त्यो समयमा पहिलो पटक बार्सिलोना छाड्न चाहेको बताएका छन् । तर, क्लबले इच्छा नदेखाएपछि चेल्सीसँगको सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
माउरिन्हो अहिले टोटेनहममा आबद्ध छन् । मोउरिन्होको प्रिमियर लिगमा टोटेनहम तेस्रो क्लब हो । उनले त्यसअघि चेल्सीमा दुई पटक तथा म्यानचेस्टर युनाइटेडको समेत नेतृत्व गरेका थिए । मोउरिन्होले बार्सिलोनामा रहेर पनि सहायक प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । बबी रोबसन प्रशिक्षक रहँदा उनी बार्सिलोनामा थिए । मोउरिन्होले पछि इन्टर मिलान र रियल म्याड्रिडमा पनि सफल प्रशिक्षण करिअर बिताए ।
पहिलो पटक बार्सिलोना छाड्न चाहेका मेस्सीले त्यसपछि भने क्लबमा आफ्नो नाम स्थापित गरे । डेढ दशक भन्दा लामो समयपछि मेस्सीले पछिल्लो पटक सिजनको सुरुवातमा क्लब छाड्न चाहे । ३३ वर्षे सफल कप्तान क्लबको व्यवस्थापनसँग सन्तुष्ट नभएकै कारण क्लब छाड्न चाहिरहेको बताइएको थियो । उनले क्लबलाई आफुलाई रिलिज गरिदिन पत्र समेत लेखेका थिए ।
तर, मेस्सीको प्रस्तावलाई बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेप मारिया बोर्टेमाउले स्वीकार गरेनन् । छाड्ने नै भए ७ सय मिलियन युरोको रिलिज क्लजको पालना गर्न भनेपछि मेस्सी पछि हटेका थिए । सम्झौताको एक वर्ष बाँकी रहँदा क्लबसँग थप विवाद गर्न नचाहने भन्दै अर्को एक वर्ष बार्सिलोनामै बस्ने निर्णय लिएका छन् । बार्सिलोना छाडेर उनी पूर्व प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाको म्यानचेस्टर सिटी जान सक्ने अनुमान गरिएको थियो ।
ला लिगामा बार्सिलोनाले ३ खेल खेलिसक्दा ७ अंक जोडेको छ । जसमा २ जित र १ बराबरी खेलेको थियो । मेस्सीले भने नयाँ सिजनमा पनि आफ्नो प्रभावलाई यथावत राखेका छन् ।